Aza omena olona hanamboatra ordinatera! & Ndash; Atsaharo ny Botnets Amin'ny Semalt
Aza omena olona hanamboatra ordinatera! - Atsaharo ny Botnets Amin'ny Semalt
Ny tambajotra robot na Botnet dia vondron'olona solosaina na bots ampiasaina amin'ny spammers ary manipika fitaovana maro. Botnets dia mety ho tambajotra ara-dalàna amin'ny fitaovana elektronika izay manolotra programa mitovy na vondrona solosaina misy virosy sy malware. Raha vao tafapetraka ao amin'ny fitaovan'ny ordinateranao izy, indrindra fa tsy ny fahalalan'ireo mpampiasa azy, ny solosainao dia ho lasa zombie, drone na ordinatera tsy misy fotoana. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany ary tsy hanohitra ny fanaraha-maso ataon'ny controller bot. Ny Frank Abagnale, Semalt Manager Success Manager, dia manazava fa amin'ny toe-javatra toy izany dia mila alefa haingana araka izay tratra ny programa anti-malware na software antivirus
Samy hafa ny habetsaky ny botnets, ary ny sasany dia lehibe ary kely ny sasany. Ny botnets lehibe dia manana olona an'arivony an'arivony, ary ireo botnets kely kely dia afaka manana andian-jiolahy an-jatony vitsivitsy monja. Ny Botnets dia hita voalohany tamin'ny Jolay 2010, fony nisambotra tanora Slovaky ny FBI. Nomena tsiny izy mba hanaparitaka zavatra ratsy ho fitaovana elektronika an'arivony. Ny solosaina 12 tapitrisa eo ho eo no tratran'ny botnets. Misy karazana botsa-pifandraisana samihafa, ny sasany amin'izy ireo dia afaka manafaingana ny fitaovana elektronika toy ny viriosy na malware.
Botnets dia ampiasaina amin'ny fomba isan-karazany, ny sasany amin'izany dia voafaritra etsy ambany:
fandàvana ny fanafihana amin'ny fanompoana:
Botnets dia ampiasaina hametraka fanafihana amin'ny fitaovana na tambajotra manokana ary manakorontana ny serivisy amin'ny fisamborana ny fifandraisana. Ankoatra izany, mandany ny sakan'ny tambajotra misy anao izy ireo ary mandresy ny loharanon'ny rafitra. Ny fandavana ny fanafihana amin'ny asa fanompoana (DoS) dia matetika ampiasaina handravana ny tranonkalan'ny mpifaninana.
Fanaraha-maso an-tserasera sy tranokala:
Ny botnet dia ampiasaina ihany koa hamelezana ny protocol TCP / IP amin'ny ordinatera ary hampihatra ny fampiharana azy manokana. Botnets dia ampiasaina betsaka amin'ny fifandonana amin'ny zombies sy viriosy maro ary ny fijinjana ny adiresy mailaka. Maniraka antontam-baovao maromaro momba ny spam sy mailaka ho an'ireo tra-boina izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny zombies sy ny bots dia nampiasaina hanodinana ny anarana sy ny tenimiafin'ny mpampiasa iray mba hahafahan'ny botnet afaka mifehy ny asany ary manararaotra izany.
Ny fandaharam-pandefasana ny solosaina ao amin'ny ordinateranao dia natao hamantarana ireo bota ary hisakana azy ireo tsy haka karazana fampahalalana. Tena mampalahelo fa ny botnets dia nampifanaraka ny hamadika ny filaminana sy ny fametrahana programa keylogger ao amin'ny milina tratrany. Keyloggers dia manampy botso hanaraha-maso sy hanodina ny programan'ny ordinateran'ny solosaina, izay ampiasaina amin'ny fampiasana ny PayPal ID na ny antsipirian'ny karatra amin'ny karatra.
Fanararaotana fialan-tsasatra isan-tsokajiny:
Nampiasaina ihany koa ny Botnets mba hanaparitaka sy hampielezana karazana viriosy sy botnets isan-karazany. Mandrisika ny mpampiasa amin'ny hetsika ratsy izy ireo ary manamboatra ny fitaovan'ny ordinatera sy ny ID ireo. Raha tsindry amin'ny rafitra pay-per-click ianao, ny botnets dia afaka miditra amin'ny antsipiriany ara-bola. Zava-bita maro no ampiasaina hanodinana ny fampahalalana ny mpampiasa mba hahazoana vola avy amin'ny rafitra fandoavam-bola Source .